E-Journal: ဘဝနေနည်း အနုပညာ
ခင်များဘဝကို ခင်များဘယ်လို ရှင်သန်နေထိုင်တယ်ဆိုတာ ခင်များရဲ့ ရွေးချယ်ချက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝဆိုတာ ရွေးချယ်မှုတွေပါပဲ။ အခြေအနေတစ်ခုချင်းစီဟာ ရွေးချယ်မှုတွေပါ။ အဲဒီအခြေအနေတွေကို ခင်များဘယ်လိုတုန့်ပြန်မလဲဆိုတာ ခင်များရွေးချယ်တာပါ။ ခင်များရဲ့စိတ်အခြေအနေကို တစ်ခြားလူတွေက ဘယ်လိုသက်ရောက်စေမလဲဆိုတာလဲ ခင်များရွေးချယ်တာပါပဲ။
ခင်များစိတ်ရဲ့ ရာသီဥတု ကြည်လင်သာယာနေဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) လေးလံထိုင်းမှိုင်းနေဖို့ ခင်များရွေးချယ်တာပါပဲ။
အထက်က စကားတွေဟာ “ဂျွန်”ပြောကြားခဲ့တာတွေပါ။
ထာဝစဉ် ကြည်ကြည်လင်လင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ရှိနေတတ်သူ၊ဘယ်တော့မဆို အပြုသဘော ပြောစရာ တစ်ခုခု အမြဲရှိနေတတ်သူ.. သူဟာ “ဂျွန်”ပါ ။ သူ့ကို “အခြေအနေဘယ်လိုလဲ” လို့ မေးလိုက်ရင် “အဆင်ပြေလိုက်တာမှ ဖြစ်နိုင်ရင် သည်လို ထပ်တူကျ ဂျွန်အမွှာပူးလေး ရလိုက်ချင်တယ်” လို့ ဖြေမှာ မလွဲဧကန်ပါ။
အဲသလို စိတ်အားတက်ကြွနေတာဟာ၊ အဲသလို စိတ်အားတတ်ကြွစေတာဟာ ဂျွန်ရဲ့မွေးရာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ ပြဿဒါးနေ့ဟာ ဂျွန်နဲ့တွေ့လိုက်ရင် ရက်ရာဇာဖြစ်သွားတတ်တာ ဓမ္မတာပါ။
သူ့ဘဝတစ်လျောက်လုံးမှာ အခုလို အပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်နေတာဟာ သူ့ရွေးချယ်ချက်ကြောင့်ပါတဲ့။
“ဂျွန်.. ဒီနေ့အဖို့ မင်းမှာ ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိတယ်။ ကြည်လင်ပျော်ရွှင်နေဖို့ မင်းရွေးချယ်နိုင်သလို၊ ဆန့်ကျင်ဖက်ကိုလည်း မင်းရွေးချယ်နိုင်တယ်”။ မနက်ခင်းမိုးလင်း အိပ်ရာကထထချင်းတိုင်းမှာ သူ့ကိုသူ အဲသလို ရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ကြည်လင်ပျော်ရွှင်ဖို့ကိုပဲ သူရွေးချယ်ပါတယ်တဲ့။
တစ်စုံတစ်ရာ ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခါတိုင်းမှာ “အဲဒီ အဖြစ်အပျက်ရဲ့ သားကောင်အဖြစ် ရွေးချယ်နိုင်သလို၊ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ လေ့လာသင်ယူဖို့ ရွေးချယ်နိုင်တယ်” လို့ဆိုကာ သူဟာ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ သင်ယူဖို့ကိုပဲ ရွေးချယ်ပါတယ်တဲ့။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သူ့ဆီလာပြီး ပြစ်တင်ညည်းတွားတဲ့ အခါတိုင်းမှာ “ဒီလူတွေရဲ့ ပြစ်တင်ညည်းတွားခြင်းတွေကို လက်ခံဖို့ ရွေးချယ်နိုင်သလို၊ ဘဝရဲ့ ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ထောက်ပြဖို့ ရွေးချယ်နိုင်တယ်” လို့ဆိုကာ သူဟာ ဘဝရဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပဲ ရွေးချယ်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီလို ရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ ဂျွန်ဟာ တစ်နေ့တော့ သူ မရွေးချယ်တဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့ရှာပါတယ်။ မျှော်စင်တစ်ခုရဲ့ ပေ(၆၀)အမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျတာပါ။ သူ မရွေးချယ်တဲ့ မတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက် ရင်ဆိုင်လက်ခံတုန့်ပြန်ပုံကိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ကျကျနန ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
(၁၈)နာရီကြာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ အထူးဂရုစိုက်ကုသမှုခံယူခြင်းတွေအပြီး ဆေးရုံကဆင်းလာတဲ့ ဂျွန်ဟာ ကျောထဲမှာ စတီးချောင်းတွေ အပိုပါလာခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျွန်ကတော့ သူ့အမာရွတ်တွေကို ပြန်ကြည့်ဖို့ ကိုယ်ပွားအမွှာပူးရချင်တယ်လို့ အရွှန်းဖောက်မြဲပါပဲ။
“အဲဒီမတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်ပျက်နေတုန်း စိတ်ထဲကို ဘာတွေဝင်လာသလဲ” ဆိုတော့….
ပထမဦးဆုံး သူ့စိတ်ထဲဝင်လာတာက မကြာခင် မီးရှုးသန့်စင်ဖွားမြင်တော့မယ် သူ့သမီးကလေးပါပဲတဲ့။ အဲဒီနောက် သူ မြေကြီးပေါ်မှာလဲကျနေတုန်းမှာပဲ သူ့မှာ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကို သတိရလိုက်တယ်တဲ့။ “အသက်ရှင်ဖို့ ငါရွေးချယ်နိုင်သလို၊ သေဆုံးဖို့ ငါရွေးချယ်နိုင်တယ်။” ဆိုကာ အသက်ဆက်ရှင်ဖို့ကိုပဲ သူရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
“အဲဒီတုန်းက လန့်ဖျပ်မသွားဖူးလား၊ သတိမေ့သွားသေးလား” ဆိုတော့....
“အခြေအနေကောင်းလာမှာပါ”လို့ တတွတ်တွတ်အားပေးလာကြတဲ့ လူနာတင်ယာဉ်သူနာပြုတွေကတော့ တကယ့်ကိုတော်ကြပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အရေးပေါ်ခန်းထဲ တွန်းသွင်းသွားကြတဲ့အခါမှာ မြင်လိုက်ရတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတွေရဲ့ မျက်နှာတွေပေါ်ကဖော်ပြချက်တွေကတော့ သူ့ကို တကယ်ပဲ လန့်ဖျပ်သွားစေခဲ့ပါတယ်တဲ့။ သူတို့ရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ “ဒီလူကတော့ သေလူပဲ” ဆိုတာကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါ သူတစ်ခုခုလုပ်မှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါတယ်တဲ့။
“အဲဒီတော့ ဘာလုပ်လိုက်သလဲ” ဆိုတော့....
“မတည့်တဲ့ဆေး ရှိလား”လို့ အော်မေးနေတဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှသူနာပြုဆရာမကြီးကို “ရှိတယ်”လို့ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် ဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေအားလုံးဟာ လုပ်လက်စအလုပ်တွေရပ်ပြီး သူ့အဖြေကို စောင့်နေကြတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ သူဟာ အသက်ဝဝ တစ်ချက်ရှုပြီး နာနာကျင်ကျင်အော်ပြောလိုက်ပါတယ် - သူနဲ့မတည့်တာကတော.....့
“ ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အား” ပါတဲ့။
အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ရယ်မောသံတွေကြားမှာပဲ “သူ အသက်ရှင်ဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်း၊ သူ့ကို အသေလို့မတွက်ဘဲ အရှင်လို့သဘောထားပြီး ခွဲစိတ်ပေးကြဖို့အကြောင်း” အဲဒီဆရာဝန်တွေ၊ သူနာပြုတွေကို သူက ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဂျွန် တကယ်ပဲ အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။
မှတ်ချက်။……….။ “Articles About Sunny (This Article Made Me Think Of You)” ဆိုပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပို့လိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးကို ကိုးကားထားတာပါ။ တတ်သိနားလည်လို့ မဟုတ်ဘဲ၊ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို လှန်တတ်ရုံသက်သက်ဖြင့်သာ ခြုံငုံပြီး မြန်မာမှုပြုလိုက်တာပါ။ http://www.sunnythoughts.com မှာ မူရင်းဆောင်းပါးကို ရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 10:26 PM
သန်း(၅၀) အတွက် ထွန်တစ်ချက်ကတော့ ထွန်ရေးညှက်ပါပေတယ်။ E-Journal လည်း ၁၀ မွှာပူး အမွှား ၁၀၀ ပူး များ ဖြစ်ထွန်းလာကြပါစေ။
သန်း၅၀အတွက် ထွန်တစ်ချက်ဆိုတာကို သဘောတွေ့ကြောင်းပါ။
နှလုံးလှဖို့ အလှဆုံးသို့ (၁)
it's not4U
the Sun will rise, Soon!
just i think
footprint of Fish!